'महिनावारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो ? एलर्जी भयो कि के भयो?' - रियाशा दाहाल (भिडिओ.....) -
Home जीवनशैली ‘महिनावारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो ? एलर्जी भयो कि के भयो?’...
‘महिनावारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो ? एलर्जी भयो कि के भयो?’ – रियाशा दाहाल (भिडिओ…..)
कहिलेकाहीँ सुटिङमै महिनावारी भइदिन्छ। त्यस्तो बेला मेकअप आर्टिस्टहरूसँग प्याड मागेर लगाउँछु। अझ महिला कलाकारले भोग्नुपर्ने अर्को मुख्य समस्या शौचालयको अभाव हो। यस्तै गाह्रो परेका बेला केही स्थानीयले शौचालय प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ। तर केही व्यक्ति यो कुरामा निकै छुच्चा भइदिन्छन्। हरेक पटक सुटिङका बेला महिनावारीका समस्या भोग्न मानसिक रूपमा तयार भएर जानु पर्छ।
मेरो सहकर्मीहरू यो विषयमा सहयोगी हुनुहुन्छ। महिनावारी भएका बेला उहाँहरूले मेरा लागि तातो पानी ल्याइदिनुहुन्छ र काममा पनि धेरै खटाउनु हुन्न। महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्ने केही कारण छैन। यही कुरा शास्त्रसँग जोडेर ल्याएकाले महिनावारीका कुचलन मानिसका दिमागमा गढेको छ।
महिनावारी सम्बन्धी अन्धविश्वास पनि थुप्रै छ हाम्रो समाजमा। एकपटक मेरा बुबा तराइ जानुभएको बेला त्यहीँकी एक मातालाई हाम्रो परिवारको जोखाना देखाउनुभएछ। त्यसमा आमाको जोखाना देखिएन रे। पछि आमालाई फोन गरेर सोध्दा आमा महिनावारी हुनुभएको रहेछ र त्यसैले नदेखिएको विश्वास गरिएको थियो। पढे-लेखेकाले यस्ता अन्धविश्वास मान्नु हुँदैन।
बार्ने भन्नेबित्तिकै महिलालाई सामाजिक कुरामा बाँध्न खोजिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। महिलालाई आराम दिने बहानामा छुद्र व्यवहार गर्नु कुनै हालतमा राम्रो हुन सक्दैन।
मान्छेको हात अलिकति काट्दा त गाह्रो हुन्छ, चार दिनसम्म नचाहेर पनि निरन्तर शरीरबाट रगत आउँदा शरीर कति गल्छ होला! अनि एउटी महिलाको शरीरमा भइरहेको यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई लिएर बाहिरी मानिसलाई अनावश्यक समस्या परेको हुन्छ।
महिनावारी भएकी महिलाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो वा एलर्जी भयो वा कपाल झर्‍यो? के भयो? म यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ, कसैको महिनावारीलाई लिएर अरूलाई किन यति टाउको दुखिरहेको छ? महिनावारीका कुचलन हटाउन शिक्षा दिनुपर्छ भनिन्छ। तर परम्परागत मानसिकतामा अल्झिएका मानिसलाई यो कुरा बुझाउन सजिलो हुँदैन।
ज्ञान दिँदा एकछिन सुनेजस्तो गर्छन् तर व्यवहारमा लागू गर्ने बेला पारा उस्तै हुन्छ। बरू हामीले विद्यालयहरूमा प्रजनन र महिनावारी स्वास्थ्यका विषय बालबालिकालाई खुलेर पढाउनुपर्छ। ताकि आउँदो पुस्ताले महिनावारीका कुचलन हटाउँदै परिवर्तन ल्याउन सकून्। Source: Setopati